यसै वर्ष रेल गुडाउने तयारिका साथ, जयनगर–जनकपुर–बर्दिवास रेलमार्गमा धमाधम स्लिपर्स बिछ्याइँदै - Enepali Online
अबको एक वर्षभित्र नेपालमा ब्रोडगेज रेल गुड्ने भएको छ । जयनगर–जनकपुर–बर्दिवास रेलमार्गको जयनगर–कुर्ता (करिब ३५ किमी) खण्डको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेकाले यसै वर्ष रेल गुड्ने भएको हो । यतिखेर सो मार्गमा धमाधम स्लिपर्स बिछ्याइँदै छ ।
सन् १९९४ सालदेखि सञ्चालनमा आएको जनकपुर–जयनगर–विजलपुरा रेल सेवा अहिले बन्द छ । तीन वर्षअघि भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र जयनगरदेखि जनकपुरसम्म ब्रोडगेज रेलमार्ग निर्माणको काम सुरु गरिएको थियो । मिडिया एनपी बाट
Previous Post Previous post: कुहिएको लासको रस मिसाएर पानी पिलाउने काठमाडौ! (फोटो सहित)
Next Post Next post: ओली बैंकक जानु अघि नै प्रचण्डले दिने भए ओलीलाई खुशियाली ! आज नै भयो यसरि कुरा तय
गुन्डा नाइके मनोजलाई लाग्यो दुर्गा तिवारीको आमाको श्राप। पूरा भयो नेताहरुको कसम नोट: माथी उल्लेखित भिडियोसँग सम्बन्धित जानकारी विभिन्न सामाजिक संजाल तथा युटुबमा प्रस्तुत भिडियोको आधारमा तयार पारिएको हो। पाठकलाई जानकारी दिने उदेश्यले उक्त भिडियोहरु यहाँ प्रस्तुत गरेका हौ। कुनै पनि भिडियो सम्बन्धि सत्य, तथ्य र यथार्थको लागि सम्बन्धित भिडियो प्रस्तुतकर्तासँग सम्पर्क गर्नुहोला। Sharing is caring!FacebookTwitterGoogle+Pinterest83shares